I-Ardor 3: Isifanekiso samathrekhi ayi-16 weDrum | Kusuka kuLinux
I-Ardor 3 - ithempulethi yedrama engu-16
Uma okokufaka kwe- isingeniso ku-Ardor 3 Kubonakale kulula kuwe, manje sesizokuxaka ngokwengeziwe. Inhloso yalokhu okuthunyelwe ukuzungeza ihlathi kancane ukuze ufunde amanye amathuba wokusebenzisa amathrekhi we-midi, umsindo namabhasi. Sizokwethula futhi iDrumGizmo, i-plug-in enhle kakhulu ye-LV2 yemisindo yesigubhu.
Inqubo ingathuthukiswa kakhulu, kepha kuzoya ngezidingo zakho. Uma sekulungiswe kahle, uzoba nephrojekthi eyisisekelo yokurekhodwa kwakho kwasekhaya. Sengivele nginekhithi yami yesigubhu eneDrumGizmo nama-guitar nezinsimbi ezine-Guitarix ku-LV2, kepha leyo enye indaba. Qaphela isilinganiso sesampula osidala ngaso (noma qala i-jack ngaphambi kwe-Ardor).
1 1. Faka ithrekhi yesigubhu ye-MIDI
2 2. IDrumGizmo
3 3. Ukulungiselela umkhondo we-MIDI
4 4. Amathrekhi noma amabhasi?
5 5. Ukudalwa nokuxhumeka kwamathrekhi womsindo.
6 6. Ukuxhumeka komsindo kwe-I / O
7 7. Amathrekhi awadlali!
8 Futhi ekugcineni
1. Faka ithrekhi yesigubhu ye-MIDI
Sinezindlela eziningana zokwengeza ithrekhi noma ibhasi e-Ardor3. Okuyisisekelo kakhulu kumenyu ethi 'Track> Add Track or Bus' [SHIFT + CTRL + N]. Enye inketho ukuchofoza kwesokudla engxenyeni yomhleli lapho kutholakala khona izilawuli zethrekhi ngayinye (okungukuthi, ngezansi kwalapho ibhasi le-Master likhona ewindini lomhleli).
Kuleli windi elisha singakhetha inombolo nohlobo lwethrekhi (i-Audio, i-Midi noma i-Bus), igama layo (uma sifaka eziningana lizofaka izinombolo egameni ngalinye) nokuqoqwa kwalo (esizokubona ngokuhamba kwesikhathi).
Ngaphandle kwalokho, kunokukhethwa okuningana okuzoya ngohlobo lwethrekhi ekhethiwe. Kulokhu, njengoba kuyithrekhi ye-MIDI, izosivumela ukuthi sikhethe insimbi oyifunayo (okungelutho ngaphandle kwama-plugins wensimbi esinawo ohlelweni lwethu). Ngizokhetha DrumGizmo (itholakala kumakhosombe e-KXStudio), iphrojekthi enkulu yekethi yemigqomo enamakhithi wamahhala ama-3 asevele atholakala okulandwayo kusuka ekhasini lephrojekthi.
Kuzwakala kanjani iDrumGizmo? Kulungile kuhle kakhulu… Njengoba ukwazi ukubona, isivele ilayishwe ku- "mixer in editor" yethrekhi ye-MIDI. Lowo mbuthano owubona ngaphansi kwesigaba esithi "Ukufaka / Ukuthumela" kungumsebenzi we-Ardor ukufaka ama-MIDI amathrekhi, okungahambelani nokusebenza kwamanje kweDrumGizmo, ngakho-ke sichofoza ngakwesokudla kuwo bese sikubeka ngokudlula ("ukudlula").
Le iphrojekthi ye-plugin ye-LV2 okuthi, ngaphandle kwesikhathi sayo esifushane sokuphila, igcwalise igebe leHydrogen Drum Machine ekusetshenzisweni okuhlanganisiwe kwe-DAW. Yize i-Hydrogen inezinto ezithile ezinhle kakhulu zesigubhu (futhi ikhanya kakhulu), ukukwazi ukusebenzisa ikhithi yesigubhu kusuka e-Ardour3 uqobo kukhululekile kakhulu. Ngibuke i- "Roadmap" kaDrumGizmo futhi isazokhula kakhulu esikhathini esizayo esiseduze (ngokwesibonelo, ngemisindo eguquguqukayo), ngakho-ke akufanele uyilibale.
Okwamanje inezikiti zebhethri ezi-3, eziphakathi kuka-2,5 no-1,5GB, ngakho-ke kuzobaluleka ukuthi ube ne-RAM eyanele. Kulawa makhithi ama-3, i-Aasimonster (eyodwa esibonelweni esedlule) yiyo engiqinisekise kakhulu (futhi inesisindo esincane kakhulu kuneDRSKit).
I-DRSKit iyikhithi ejwayelekile yesigubhu ene-1 tom no-2 toms ezintantayo, eyenzelwe izitayela eziningi zomculo. Naphezu kobukhulu bayo obukhulu (nomthwalo olandelayo ku-RAM), inikeza ukucushwa okuningana (okuncane, okuyisisekelo, okugcwele…) ukuze sikwazi ukukhetha okuvumelana kahle nathi. Isebenzisa iziteshi zomsindo eziyi-13.
I-Aasimonster neMuldjorKit zingamakhithi ama-metalheads ama-2, yize esebenziseka kunoma yisiphi isitayela. Ngenxa yensimbi, sine-4 toms, Chinese, kick and / or snare trigger… Banesisindo esingaphansi kwe-DRSKit futhi bethula izinsimbi eziningi, yize kuzobandakanya ukusebenzisa iziteshi zomsindo eziyi-16 uma sifuna ukuphatha izigubhu izinzuzo ".
Ukusebenza kukaDrumGizmo kuqondile kakhulu (okwamanje). Sikhetha isigubhu esibonisa ifayili le-Kit .xml, ibha yenqubekela phambili izoshintsha isuke kokuluhlaza okwesibhakabhaka iye kokuluhlaza uma ilayishwe ngokuphelele kwi-RAM, bese sizokhetha elinye ifayela le-.xml elibonisa ukulandelana kwezinsimbi maqondana neGeneral Midi okujwayelekile.
Qaphela: emzamweni wami wokuqala ngiqale ukulayisha i-drumkit ngabe sengikhetha imephu ye-MIDI (ngaphandle kokulinda iDrakumkit ibe luhlaza), angazi noma yehlulekile ngenxa yalokhu, kepha njengoba ngiyilindile ilayishiwe bese ukhetha iMidimap angibanga nankinga.
3. Ukulungiselela umkhondo we-MIDI
Ngemuva kokulayisha i-plugin yensimbi, singaqala ukungeza amanothi. Uma "sizobabhala" sisebenzisa isihleli se-Ardor, kungakuhle ukwengeza ithrekhi ukuze sikwazi ukuyibuka kahle.
Kunezinketho eziningi zokukhulisa ukuphakama kwethrekhi. Singachofoza bese "sidonsela" phansi esifundeni sezilawuli, noma singasikhetha, chofoza kwesokudla bese usishintsha kusuka kumenyu yokuqukethwe. Ekugcineni, kwesokudla kwezilawuli zokusondeza ibha yamathuluzi kukhona izinkinobho ezimbili zokwandisa nokugoqa amathrekhi.
Amathrekhi we-MIDI ayakhombisa, eduze kwezilawuli, izinkomba zevolumu zesiteshi ngasinye nopiyano olunohlu lwamanothi. IDrumGizmo ifaka imisindo phakathi kwe-B1 / 35GeneralMidi ne-C4 / 60GM (okuyilapho iningi lemisindo ejwayelekile yokushayisana ikhona.
Singakushintsha ukuphakama kwale piyano ngezindlela ezimbili:
Ukuhambisa izilawuli endaweni enomthunzi ngakwesobunxele bepiyano. Kusuka phezulu kuye ezansi yilezi: umkhawulo ophezulu, ibanga nomkhawulo ophansi.
Ukudweba imikhawulo. Kulokhu sifaka amanothi amabili kusihleli: inothi eliphezulu neliphansi. Ngemuva kwalokho siya kwimenyu yokuqukethwe yethrekhi (qhafaza kwesokudla) bese ukhetha u-'Banga lokuqaphela> Lungisa okuqukethwe ', lapho i-Ardor izokhetha khona indawo engcono kakhulu ye- «piano-roll» yalokhu kuphakama kwethrekhi namanothi asetshenzisiwe.
Uma manje sichofoza kunoma yimaphi amanothi wepiyano anomsindo ohambisana nawo kuDrumGizmo, singalalela izigubhu zethu.
Ngizizwe ngiphoqelekile ukukutshela konke ngalokhu, kepha umhleli we-Ardor kuzofanele ambozwe kokunye okuthunyelwe, ngakho-ke ngenxa yesifundo, sizongenisa ifayela le-MIDI lengoma yesigubhu esivele yenziwe (noma iluphu) .
4. Amathrekhi noma amabhasi?
Lesi sinyathelo asibalulekile kuphrojekthi, njengoba izigubhu zeDrumGizmo zizwakala kahle ngokwanele ukuthi zisetshenziswe ngethrekhi yethuluzi lapho kuqanjwa. Ngaphandle kwalokho, singaphatha ithrekhi efanayo ye-MIDI ngama-plugins, ngakho-ke ubuncane bayo bungalinganiswa kusuka kulokhu.
Ukuhambisa umxube "ngokuqhubekayo", kuzodingeka silawule izingxenye zeKit ngokuzimela, futhi ngenxa yalokhu kuzodingeka ukuthi "sizidlulisele" kumathrekhi abo noma emabhasini. Ukwenza ukwelashwa kube lula, sizokwakha amabhasi amakhulu ukuqoqa ama-toms, amasimbali namasayikhoni. Umehluko phakathi kwamabhasi namathrekhi ukuthi, kokugcina, singarekhoda isignali yomsindo edlula kuzo (ibhasi ukuphatha kuphela noma ukuhambisa umsindo ohambisanayo).
Uma konke esikufunayo ukuphatha izinsimbi ngokuzimela, into efanele kungaba ukudala amabhasi kuphela. Kodwa-ke, umqondo wami ukulahla umsindo weDrumGizmo kumathrekhi alalelwayo ukuze kamuva ngikwazi ukukhubaza i-plugin futhi ngaleyo ndlela ngikhulule i-RAM, ngakho-ke ngizokwakha amathrekhi we-16 Mono Audio okulahla isiteshi ngasinye se-DG. Kamuva, ngihlanganisa la mathrekhi ngamabhasi ama-5: ukukhahlela (i-mono), ugibe (i-mono), i-toms (i-stereo), ama-overheads / amasimbali (i-stereo), negumbi / i-ambience (i-stereo).
5. Ukudalwa nokuxhumeka kwamathrekhi womsindo.
Ngisebenzise i-Muldjord Kit, enezinsimbi eziyi-16. Uma incazelo etholakala kuwebhu ibinganele, singazi ukuthi ziyini ngokuvula ifayela le-.xml lebhange lomsindo ngesihleli sombhalo.
Lezi ziteshi zihlelekile, ngakho-ke i-Kit okukhulunywa ngayo yile:
1. Imvelo Kwesobunxele.
2. Imvelo efanele.
4. Isigubhu sebhesi esingakwesobunxele.
5. Isigubhu sebhesi sangakwesokudla.
6. Umoya ongakwesokunxele.
7. Umoya ongakwesokudla.
10. Bordonera webhokisi.
12. UTom 1.
13. UTom 2
14. UTom 3
15. UTom 4 (i-base tom).
Ngakho-ke, ngizokwakha amathrekhi womsindo we-16 MONO (engizowabeka pan ukunambitha uma kunesidingo) bese ngiqoqa ngisebenzisa amabhasi ama-5 ashiwo ngenhla.
Uma sekudaliwe, ngiwaqamba kabusha ngomzimba webhethri engifuna ukuwaxhuma kulowo nalowo ngiwaqoqe. Ukuzihlanganisa ngamaqembu, ngikhetha eyokuqala bese, ngibambe ukhiye we-SHIFT, bese ukhetha eyokugcina (i-Ardor izokhetha ephakathi). Kumenyu yokuqukethwe ngizokhetha 'iqembu> iqembu elisha'.
Ngalokhu, amathrekhi aqoqiwe azobonisa ithebhu ngakwesobunxele bendawo yabo kusihleli. Ngokuchofoza kuso, umbala okhethwe kuwindi langaphambilini uzoboniswa.
Amathrekhi aqoqiwe angabelana ngezici ezibonwe ngenhla. Uma sisebenzise "inzuzo", empeleni, ibizoguqulwa ngokulinganayo kuwo wonke amathrekhi lapho ihambisa i-fader yenye yazo. Angidingi ukwabelana nganoma yikuphi kwalokhu, kepha ukuwahlanganisa ngamaqembu kungivumela ukuthi ngifihle iqembu ngakho angiliboni lapho ngifuna ukusebenza namabhasi kuphela.
6. Ukuxhumeka komsindo kwe-I / O
Imenenja yokuxhuma i-Ardor iyatholakala kusuka kumenyu naku-track ngayinye noma ngebhasi. Leli fomu lokugcina likhululekile kakhulu, ngoba lihlukanisa okusho ukungena noma ukuphuma kwalowo mzila. Uma ubheka i- "mixer in editor", noma kuthrekhi ngayinye ye-mixer [Alt + M], ngezansi nje kwegama lengoma noma ibhasi kunebhokisi elinombhalo othi "-", "input" noma okufanayo. Ngokuya ngokuthi uqhafaza kwesokudla noma kwesobunxele kuyo, ungafinyelela kumphathi wokuxhuma noma ubakhethe ohlwini lokudonsela phansi. Ngezansi kwe-fader nezilawuli ze- "M / Post" kuthrekhi ngayinye noma ibhasi kunelinye ibhokisi, elizokwenza okufanayo ngokukhishwa kwalokhu.
Ngokuqonda kwethu, ngifuna ukuxhuma ukuphuma kweDrumGizmo kokufakwayo kwamathrekhi alalelwayo, ngakho-ke ngizocindezela isilawuli esingezansi nje kweM / Post yethrekhi ye-MIDI. Ngemuva kokuxhuma isiteshi ngasinye seDrumGizmo nethrekhi yaso yomsindo ehambisanayo, kubukeka kanjena:
Njengoba ukwazi ukubona, imiphumela yale threkhi ihlelwe ngokuvundlile (ngokucindezela inkinobho yokuxhuma okukhiphayo). Konke okufakwayo kungenzeka kuvele kubheke phezulu, kuhlukaniswe ngamathebhu ngokuya ngokufakwa kwabo emabhasini, kumathrekhi, kwizinsimbi, njll.
Kuze kube manje kulula ngangokunokwenzeka (futhi okufakwayo sekuvele kungu- "durilla"). Sinokuxhumeka okukodwa kwethrekhi ngayinye ngoba kungamathrekhi e-mono, kepha uma ufuna ukuwahambisa emabhasini, izinto zizoba nzima, ngoba uma ngiwafaka kuzophuma isitiriyo, ngakho-ke kuzofanela kwenziwe ukuxhumana kabili. Ukuyibona, isibonelo esihle.
I-hype ivame ukuba phakathi nendawo. Ngakho-ke ngakha ibhasi le-mono, futhi efanayo nebhokisi. Noma kunjalo, i-Ardor izongikhombisa ngokuzenzakalela imiphumela emibili (L / R) yethrekhi yeMono (uma kungenzeka ngifune ukuyifaka). Ibhasi le-mono lizoba nokufaka okukodwa. Uma nje singaphenyi, akunandaba ukuthi sixhuma iKick-L kanye / noma iKick-R kokufaka okukule kuphela kule bhasi.
Kodwa-ke, kujwayelekile kakhulu kuma-pan toms, ngakho-ke kuzofanele siqiniseke ukuthi isiteshi sabo se-L siya kokufakwayo kuka-L kwebhasi yetom, ditto nesiteshi se-R kokufaka kwe-R.
Kunoma ikuphi, iDrumGizmo ine- «ukopha», ngakho-ke imakrofoni yensimbi ngayinye ithatha umsindo wezinye izingxenye zeKit ngezinga elikhulu noma elincane, ngakho-ke uma upaka (okungadingeki ukuthi ube khona), ungaguquguquki ngokubekwa kwezingxenye zeKit (kunezithombe namavidiyo kuwebhu) ukuze kungazwakali kungelona iqiniso.
7. Amathrekhi awadlali!
Uma benginika i- € njalo lapho ngithi into efanayo… Ngokuzenzakalelayo, amathrekhi ka-Ardor namabhasi axhumene nebhasi eliyinhloko, nalo elixhunywe kusipikha / ekhanda lokubonwayo komsindo. Uma sifuna "ukuhlukanisa" iziteshi zeDrumGizmo kuthrekhi ye-MIDI, kufanele sikunqamule lokhu ku-Master. Kungani? Ngaphandle kwalokho, lapho silinganisa ithrekhi yomgqomo wokukhahlela (ngokwesibonelo), i-master izohlanganiswa nokukhishwa kwethrekhi lapho kulayishwa khona iDrumGizmo (esingakwazi ukuyithulisa, ngoba uma kungenjalo iDrumGizmo ibingathumeli lutho kumathrekhi axhunyiwe).
Lokhu yizisekelo, kepha kunesinye isici (kuphela esihlobene namathrekhi we-Audio, hhayi amabhasi). Futhi, sifunda okuthile okusha: ithrekhi ngayinye yomsindo inezilawuli ze- "input" ne- "disk". Owokuqala uzokwenza lokho okungena ekudlaleni kwethrekhi (noma ngabe ukudlala kumisiwe) kuthi owesibili adlale okurekhodwe kuthrekhi lapho sidlala okuqoshiwe.
Isiphetho: uma sinqamule ithrekhi ye-midi enkosini futhi sayidlulisela kumathrekhi alalelwayo, kuzofanele senze kusebenze ukulawulwa kwe- «input» ngakunye kwabo. Lo mqondo awukho emabhasini, ngoba inhloso yabo ukuhambisa (hhayi ukurekhoda noma ukukhiqiza kabusha) umsindo, uphathwe noma cha.
Ngalokhu sizobe sesilungiselele iphrojekthi enezingoma zomgqomo eziyi-16, esingangeza kuzo amathrekhi avela kwezinye izinsimbi, ama-plugins wokuzenzakalelayo, njll. Sizoyibona ngecala elilula lakamuva.
Kusuka kwimenyu ethi 'Ifayela' singagcina iseshini ngelinye igama noma i- "capture", kepha iyohlala ixhunyaniswa nefolda yale phrojekthi efanayo. Into elula kunazo zonke, uma singafuni ukungcolisa le folda, ukuyikopisha bese siyinamathisela ngelinye igama, sikhumbula ukuqamba kabusha i-.xml engaphakathi kuyo futhi.
Ngemuva kokwenza le nqubo okokuqala, ngeke kuthathe ngaphezu kwemizuzu embalwa ukudala izifanekiso zethu, ezizosisindisa ukuthi sihlanganise iphrojekthi efanayo kusukela ekuqaleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Ardor 3 - ithempulethi yedrama engu-16
URoy batty kusho
Ngilahlekile ku "Uma ukungena kwesingeniso ku-Ardor 3 kubonakala kulula" ...
Phendula uRoy Batty
Ngimbi kakhulu! uma i-PC yami ibingcono kakhulu bengingasebenzisa amabhasi esikhundleni sokuthi ngidale amathrekhi we-crappy ukususa i-plugin ngokuhamba kwesikhathi. i-xD
Kuhle kakhulu, iBaltar, njengenjwayelo. Ngaphandle kokucaca okukhulu ngishiywe ngongabaza ngale ngxenye
"Bese sizokhetha elinye ifayela le-.xml elikhombisa ukulandelana kwezinsimbi maqondana ne-General Midi standard."
Usho noma ngabe ukhetha yiphi i-drumkit, izohlala ihambisana namafayela we-GM?
Ngiyabuza, ngoba kube kanye kuphela lapho ngike ngazama ukungenisa ithrekhi yesigubhu ye-MIDI, futhi yaguqula ukushaya kogibe kwaba yi-phantom roll. Ngiyibeka phansi kumephu yefayela le-.xml, kepha uma bekungenjalo, angazi ukuthi ngiyilungisa kanjani. Okwamanje ngizozama amaphethini amasha we-MIDI.
Ingabe kukhona iqoqo elihle lamaphethini wesigubhu ahambisanayo we-DrumGizmo ongawancoma?
Siyabonga futhi maqondana!
Yebo, izohambisana namafayela we-GM (inqobo nje uma i-Kit okukhulunywa ngayo inemisindo esetshenziswa yilelo fayela).
Nazo-ke. I-Drumgizmo DrumKit ngayinye ihlelwe kanjena:
1. Amafolda anamafayela womsindo.
2. Ifayela le-Drum Kit .xml.
Ifayela le-.xml elihlobene nomsindo ngamunye walesi sigubhu esiya kumyalo ohambelana nawo we-MIDI (inombolo noma inothi).
Noma kunjalo, kuzoncika ekunambitheni kwalowo owenze ikhithi. Isibonelo, iMuldjorKit ayinayo i- "sidestick" (hit drumstick), futhi esikhundleni salokho (inombolo / inothi / imiyalo ye-MIDI) ine-phantom roll.
Ngemuva kwalokho sinecala eliphikisayo: Izikolo ze-MIDI ezisebenzisa i- "Rock snare" (imiyalo 40), amaKits angenawo umsindo, ngoba ahlobanisa ugibe nomyalo 38.
Noma kunjalo, inkinga enkulu engiyithola ngezigubhu ihlale iyi-timpani (kamuva enamasimbali, kodwa incane kanjalo). Kwi-Hydrogen kunzima kakhulu ukuba ne-4 kit kit (i-floor tom ne-3 rack toms), iningi kube yi-1FT + 2RT (okuncishiselwe i- "metalada"). Ngenhlanhla, amakhithi ama-3 DG alinganiselwe kahle, ake sibheke ukuthi abantu bayakhuthazwa yini ukuba benze okuningi (futhi sibone ukuthi ngolunye usuku bazovumela yini imisindo engashintshashintsha phakathi kwamakhithi). 😀
Mayelana namaphethini wesigubhu, inqobo nje uma eyiGeneral Midi futhi engenawo "amathuluzi" ngaphandle kwamanothi eDrumKit (uma kungenjalo kuyindaba yokushintsha amanothi enzelwe amanye), noma ngubani uzokwenza. Kukhona ukuqoqwa kwamaphethini wesigubhu laphaya okuvame ukufika ku-zip ebalazwe ngama-VST ajwayelekile (i-AD, i-SD, njll.), Futhi imvamisa afaka phakathi imephu ye-MIDI ukuze ukwazi ukuwasebenzisa kwamanye ama-plugins.
Esiteshini se-YouTube Bestplugins une-zip yamahhala. I-Oddgroves.com nayo inepakethe lamahhala futhi, uma ubhalisela i-imeyili yakho ngezikhathi ezithile ithumela enye into. Uma kungenjalo, ungahlala uvula izikolo ze-MIDI zamaqembu akho owathandayo bese usika amaphethini. 😀
Sawubona, ngisha sha ukusebenzisa i-linux, ngithanda umdlandla omkhulu, ilula impela futhi isebenza ngokubabazekayo, noma kunjalo nginemibuzo embalwa, empeleni angazi ukuthi ngiyifaka kanjani i-drumgizmo noma enye i-dd uma unganginika isandla ngingakuthokozela kakhulu lokho.
Sawubona, ifakwa kanjani idrumgizmo?
Sawubona, uyifaka kanjani i-drumgizmo ukuyisebenzisa?
Ungayisebenzisa kanjani iBonjour ku-Pidgin nge-Arch Linux?
Faka futhi ulungiselele i-Qemu-KVM ku-Arch Linux [Kubuyekezwe]